‘आमा ! यो शहरमा आफ्नै सास बेचेर आफै बाच्नु पर्ने रहेछ’ | दर्पण दैनिक
‘आमा ! यो शहरमा आफ्नै सास बेचेर आफै बाच्नु पर्ने रहेछ’
प्रकाशित मिति: २०७६ मंसिर १६ गते ०९:४३
आज एउटा लेख लेख्न मन लाग्यो खै कता बाट सुरुवात गरौ शब्दहरुमा बयान गर्ने मन लाग्यो । म पनि विकट खोटाङको एउटा शहरमा जन्मेको मान्छे मेरो पनि एउटा सपना थियोे काठमाडौं शहर कस्तो छ । यहाँ बस्ने मान्छे कस्तो होलान । यहाँ त परापुर्वक काल देखिन एउटा सुन्दर शहरको रुपमा बयान गरिएको शहर थियोे मलाई पनि लाग्थ्यो यहाँका मान्छे सुखी अनि खुशी छन् । हो मनमा यहीँ प्रश्न आईरहन्थ्यो अनि सोचे म पनि काठमाडौं जान्छु ।
यहाँ बाट जे गर्न पनि सजिलोसँग सकिन्छ यहीँबाट सपना पूरा गर्न अत्यन्तै छिटो छरितो हुन्छ हो म पनि यहीँ सोच्ने गर्द थिए । आज लाग्दैछ होइन यहाँका मान्छे एकदमै दुखि छन् । यहाँको बस्ती नजिकै नजिकै टासिंएको छन् । मनहरु पहाडका घरहरू जस्तै टाढा टाढा रहेछन् । पहाडका घरहरू टाढा टाढा छन् तर त्यहाँ मन अत्यन्तै नजिक नजिक छन् । हो आमा साच्चै यो शहरमा त पानी पनि किनेर खानु पर्छ । अनि २० रुपैयाँमा किनेको पानीले झण्डै पाँच पटक पिसाब लाग्छ त्यसको २५ रुपैया तिर्नु पर्छ । हो आमा यहाँका मान्छे त मल्टिपल सपना बोकेर बसेका रहेछन् ।
मैले देखे केही मान्छे बाँच्नका लागि खादा रहेछन् । र केही मान्छे खानाका लागि बाँचेका रहेछन् हो यस्तै लाग्यो यो शहर यहाँ सबैको आफ्नै पिडा छन् । कसैलाई साउले कराई रहेको छ । कसैलाई साउले कसैलाई बेचिरहेको छ । कोहि अन्तिम सासका लागि छट्पटी गरिरहेका छन् हो आमा यो शहर यस्तै छ । अनेकौं सपनाको भारी बोकेर प्रत्येक दिन भित्रिने यो काठमाडौं शहर यस्तै लाग्यो आमा यो शहर मेरो पनि मनमा अनुउत्तरित प्रश्न छन् ।
यो करोडौंको भिडमा कता कता हराइरहेको छु । तर पनि एक दिन यो भिड छिचोल्दै निस्कने आशामा छु । हो आमा मेरो पनि करोडौं बीचमा मल्टिपल सपना छ । ७७ जिल्लाका मानिस जब भेट्छु । कोहि छोरा भेट्न आउने घण्टौ कुरि बस्ने कोहि छोरी भेट्न आउने छन् आमा तर मलाई भेट्न आउने कोहि छैन । हो आमा म पनि धुवा धुलो भिडभाड सबै छिचोल्दै अगाडि बढिरहेको छु । मेरो पनि यो शहरमा मल्टिपल सपनाको भारी छु । यहाँ त खुशी उर्जा बेचेर आफै बाँच्नु पर्ने रहेछ । हो आमा यो शहरमा आफ्नै सास बेचेर आफै बाच्नु पर्ने रहेछ ।आमा म पनि विस्तारै सिक्दै छु ।
(लेखक चित्र कुमार कार्की उल्टो मोटरसाइकल चलाएर विश्व कृतिमान राख्न सफल व्याक्तित्व हुन ।)